ကတိ တည်လွန်း တဲ့ ဆရာဝန်မကြီး နဲ့ ဝမ်းသာ လွန်း လို့ ကျတဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ မျက်ရည် – Let Pan Daily
“ဒေါက်တာ ကတိ တည်တယ်နော် ”
” ဟင် ” ” ဒါ မေ့ေ ဆး ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်စိန် မှတ် လား ” မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီ‌ ဆေးရုံက အံ့ဩတကြီး မေးလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာတစ်ဦးရဲ့ အသံ လူနာ တင်ယာဉ် ပေါ်က ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်က ခပ်ပါးပါး ပြုံးပြ တယ်။
လူနာနံပါတ် ၃၀ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် ပြည်မြို့က မေ့ဆေး ဆရာဝန်ကြီး ဟာ Positive လူနာ တစ်ဦး ရဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ လူနာရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ventilator(လေဝင်ပေါက်) ကနေ tube (ပိုက်ရှည်) ထည့်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆိုတာ အနည်းဆုံး ဆရာဝန် သုံးဦးလောက် လိုအ ပ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ ဒီအခြေအနေမှာ ဒေါက်တာဟာ တစ်ခြား ဆရာ ဝန်တွေ ကူးစက်မှာ စိုးတဲ့ အတွက် သူတစ်ယောက်တည်းပဲ လုပ်ဖို့ ‌ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ventilator(လေဝင်ပေါက်) ကနေ tube (ပိုက်ရှည်) ထည့် ရာမှာ သုံးကြိမ်လောက် အထိ မအောင်မြင် ဒါကြောင့် ဒေါက်တာဟာ သူမရဲ့ အကာအကွယ်ဖြစ် တဲ့ Goggles(ရေ/လေကာ မျက်မှန်) ကိုချွတ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှ အောင်မြင်သွားပါတော့တယ်။ Goggles ကို ချွတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခံရမယ်ဆိုတာ ဒေါက်‌တာ ကောင်းကောင်း သိတယ်။ အဲ့ဒီထက် ဒေါက်တာ ပိုသိနေတာက လူနာ အသက်ရှင်ဖို့တဲ့……..
ဒေါက်တာဟာ positive လူနာ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ တော့ ……….သူမ ဟာ positive လူနာဖြစ်သွားတော့တယ်။ သူ့အသက်ကို စွန့်ပြီး လူ‌နာအသက်ကို ရွေးသွားတယ်။ သူမ ဟာ အခန်းအပြင် ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့အနားကို ဘယ်ဆရာဝန်မှ မကပ်ခိုင်းတော့ပါဘူး တဲ့ ဒေါက်တာ ရဲ့ အဖြေအတည်ပြုချက်မှာ ညက positive ထွက် လာတဲ့အချိန် ယူနီဖောင်းတွေ ချွတ် ပြီး ဒေါက်တာကို မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကို ခေါ်သွားကြဖို့ PPE ဝတ်စုံ ပြည့်သူတွေ ရောက်ရှိလာတော့တယ်။
ငိုယိုနေကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကို ဒေါက်တာက မငိုဖို့အတွက် ခေါင်းခါပြ တယ်။ လူနာ‌ တွေ နဲ့ ထိတွေ့ကြတဲ့အခါ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ မှာတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါက်တာ ပြန်လာခဲ့မယ် တဲ့ …………. တစ်ချိန်လုံး ငြိမ်သတ်နေတဲ့ ပြည်မြို့ကြီးက ဒေါက်တာ ပြန်လာခဲ့မယ် လည်းဆိုရော ရှိုက်သံ ပါအောင် ငို ပါတော့တယ်။
ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်စိန် က ခပ်ပါးပါးပြုံးရင် လူနာတင်ယာဉ်ပေါ် ကို တက်သွားတော့တယ်။ ယာဉ်တန်းကြီးက ပြည်မြို့ကနေ ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီး ကို ဦးတည် အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းနှင်ထွက်ခွာတော့တယ်……….. .
ပြည်မြို့ကြီးက ရုတ်တရက် မျက်ရည်တွေ သုတ်ပြီး ယာဉ်တန်းနောက် ကို အပြေးအလွှား လိုက် ရင် လှမ်းအော်ပြောတယ် ဒေါက်တာ ကတိတည်ရမယ် နော် တဲ့……. ဒီနေ့ (မေလ ၂၅ရက် )တော့ recover ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရပါပြီ။ ကျန်းမာစွာနဲ့ ပြည်မြို့ကို ပြန်ပါတော့မယ်။
ဪ ဒါနဲ့ ပြည်မြို့ကြီးရေ ဒေါက်တာ ကတိတည် တယ်နော်……. ဟာ ခင်ဗျား က ဘာလို့ ငို တာလဲ မျက်ရည်တွေ ဘယ်ပြန် ညာပြန် သုတ်ရင်း ပြည်မြို့က ပြန်ပြောရှာတယ်။ ” ဟုတ်တယ် ဝမ်းသာရင်လည်း ဒီမျက်ရည်က မရဘူးဗျ” တဲ့ ……….. —————-